want to know Apple ID my iphone4— MYSTERY ZILLION
want to know Apple ID my iphone 4
July 2013 edited July 2013 in iPhone
Apple ID သိချင်တာ ဘယ်နေရာမှာကြည့်လို့ရလဲ
ကျွန်မ ဖုန်းက4ပါ
လော့ဖုန်းဖြစ်နေလို့ ပြန် ငွေ account သွင်းပြီး ဆိုင်မှာ ဖြေထားတာပါ
တချို့ကပြောတော့ သိချင်ရင် lock လုပ်ထားတဲ့ ဆိုင်ကိုပဲ ပြန်မေးမှ သိရမယ်တဲ့
သူတို့ကို မေးတော့ကော ပြောပါ့မလား သူတို့က ပြောမှာမုတ်ဘူးတဲ့
အဲ့တာမှ ဆိုင်ကပဲ software သွင်းလို့ရမှာလို့ ပြောတယ်
တချို့ software တွေက အဲ့တာတောင်းနေလို့
July 2013 edited July 2013 Administrators
Go to setting > App Store and you will see apple ID. But you can't know password.
ဒါဆိုရင် software သွင်းချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ password မသိတော့
တချို့ကတောင်းလို့ ဆိုင်ကိုသွားမေးရမှာလဲ အကို
setting > App Store > Click on Applie ID > Sign Out
You can sign out and sign in with your account.
But app update can't . It's require old account password.
ကိုယ်ဝယ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်မှာဆို game နဲ့ application တွေ အလကားသွင်းပေးလောက်ပါတယ်။ တခြားဆိုင်မှာဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံပေးရလောက်ပါတယ်။ ဆိုင်က password တော့ မပေးလောက်ဘူး ထင်တယ်။ ကိုယ်ပိုင် အကောင့် တခုဆောက်ထားသင့်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံထည့်မထားရင်တောင်မှ အလကားပေးတဲ့ game နဲ့ application တွေ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။